မြန်မာတို့ရဲ့ ကရဝိတ်နန်းတော် – YANGON STYLE
(Photo by: https://www.facebook.com/KaraweikPalace/)
သင်ဟာ မြန်မာတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနှစ်သာရကို ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကရဝိတ်နန်းတော်သို့ ကြွမြန်းခဲ့ပါလို့ အကြုံပြုပါရစေ…
ကရဝိတ်နန်းတော် ဆိုတာက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရင်သပ်ရှု‌မောဖွယ် အကအလှတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ထည်ဝါလှတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေ အပြင် နိုင်ငံခြားသားတွေအကြိုက် မြန်မာ့ရိုးရာအစားအသောက်ကို ခမ်းနားကြီးကျယ်စွာ တည်ခင်းဧည့်ခံတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တစ်ခုတည်းသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်တွေကို ဒေါင်းလန်း တစ်နည်းအားဖြင့် သစ်စေးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့လင်ဗန်းပေါ်မှာ တည်ခင်းဧည့်ခံလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တစ်ယောက်တည်းသမားတွေအတွက် set menu ဒါမှမဟုတ် တော်၀င်မိသားစုပုံစံ set menu အစရှိတာတွေကိုပါ ရရှိနိုင်ပါတယ်။အပြင်အဆင်ပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ကရဝိတ်ငှက်နှစ်ကောင်ဟာ ရွှေရောင် တောက်ပစွာနဲ့ ကန်တော်ကြီးဉယျာဉ်ရဲ့ ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တူနှစ်ကိုယ်ယှဉ်တွဲနေတဲ့ ထူးခြားလှတဲ့ ပုံစံ ၊ ဒါ့အပြင် ပုံဖော်ထားတဲ့ ပန်းပုလက်ရာတချို့နဲ့ ကနုတ်ဆွဲလေးတွေဟာ အင်မတန်မှ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းအောင် တည်ဆောက်ထားတာမို့ မြန်မာပြည်ကို လာလည်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေက အထူးတလည် သွားရောက် ဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုးလည်း ရှိသလို ညနေစာ နေ့လည်စာ တည်ခင်းတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ကရဝိတ်နန်းတော်က သူ့ရဲ့ပုံစံတင်မကဘဲ အထဲမှာ ၀န်ဆောင်မှုပေးတဲ့လူတွေကလည်း အင်မတန်မှ ထူးခြားလှပါတယ်။
ဧည့်ကြိုတွေဟာ ရှေးမြန်မာနန်းတော်တို့ရဲ့ တံခါးစောင့်ပုံစံတွေ ၊ အစားအသောက်၀န်ဆောင်မှု ပေးတဲ့သူတွေဟာလည်း မြန်မာ့အ၀တ်အစားကို အားကျဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေ ၊ ဒါ့အပြင် မြန်မာ့နန်းတွင်းပုံရိပ်ကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ အဆောင်အယောင်တွေသာမက မြန်မာ့နန်းတွင်း မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု အစရှိတဲ့ စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းလှတဲ့ အရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုလို့ တင်စားရင် မမှားပါဘူး။ဒီကရဝိတ်နန်းတော်ရဲ့ အထူးခြားဆုံးကတော့ ညနေစာအတွက် တည်ခင်းဧည့်ခံသူများအဖို့ မြန်မာ့ရိုးရာဆိုင်းဝိုင်းနှင့်တကွ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ပဉ္စလက်ဆန်တဲ့ ကပြဖျော်ဖြေမှုတွေကို တင်ဆက်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့စောင်းအနုပညာကို ဧည့်သည်တော်များ ခံစားနိုင်စေရန်အတွက် နေ့စဉ် တီးခတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
Karaweik Palace, Kandawgyi Compound, Mingalar Taung Nyunt Tsp . Yangon . Myanmar
Hot Line : +959-459-222-222
Contact Number : 01-290546, 01-290547